လှုပ်ရှားနေသော မိုးကောင်းကင်: ဒေါသ
ငါ့ကိုယ် …. ငါ
နိဗ္ဗ္ဗါန် တခါးမှာ ရောက်နေလားမသိ။ ။
ကြွေမွ ကျဆင်းသွားခဲ့ …. ။ ။
အစ်ကို့ “ဒေါသ”ကို ခံစားသွားတယ်။
အစ်ကို နာဂစ်နဲ့ လွှဲသွားတယ်ထင်တယ်။